Olom-baovao no mitondra zava-baovao… | NewsMada
Olom-baovao no mitondra zava-baovao…
Par Taratra sur 02/01/2019
Taona vaovao, fijery vaovao, rivo-baovao, zava-baovao… Andrandraina izay amin’izao taona vaovao izao. Na eo amin’ny isam-batan’olona izay, na isan-tokantrano, na isan-tsehatra; eny, na eo amin’ny isam-pirenena sy ny sehatra iraisam-pirenana aza. Arahaba soa, arahaba tsara. Mbola velona tsy maty fo aman’aina: afa-mihetsika, miasa…
Amin’ny taona vaovao toy izao no mahabe ny nofinofy amin’izay hatao, ny fikasana, ny famaritana an’itsy sy iroa… Misy aza ny mivoadivoady amin’izany. Saingy mijanona ho eritreritra ihany izany rehetra izany raha tsy mihetsika ny tena. Eny, na toy inona fifampirariana soa amin’izay hoe hoentin’ny taona vaovao.
Amin’ny faniriana toy izany, ny tena aloha no mila miova, vao afa-kanova: tena resy lahatra amin’izay hatao, manapa-kevitra, vonona, sahy, miroso… Lanja miakatra ny fiainana. Ny madio, ohatra, no afa-kanadio; ny manana no afa-kanome; ny miova no afa-kanova… Ao anatin’izany izay hatao, ny fomba fiasa, izay hiara-miasa…
Mba tsy ho am-boalohany ihany izany fa mila fiaretana sy faharetana. Homen-danja sy dikany ny fihafiana fa tsy ho zary fiforetana anaty lava: matoa miaritra ny mafy sy mihafy, misy andrandraina ao aloha ao. Mandra-pahoviana? Mila faritana mazava izay hatao ary tena azo tanterahina, izay hanaovana azy, ny fe-potoana…
Amin’izany, sao lany andro eo am-pamaritana izay hatao? Na be famaritana sy lavitra fijery loatra ka ho tafintohina an-dalana amin’ny farany. Na tsy miainga akory dia valalanina sy fanina: be mandrakariva ny mbola hatao no ho izay kely vita. Vao mainka izay hodiavina fa fohy sady haingana ny fandehan’ny fotoana.
“Tsy misy zavatra mandeha haingana toy ny taona”, hoy ny mpahay hosodoko malaza tamin’ny taonjato XV, i Léonard de Vinci. “Tsy ilaina ny mitady izay hanampiana taona ny fiainana fa izay hanampiana fiainana ahay ny taona”, hoy ny filoha amerikanin ateo aloha izay, John Fitzgerald Kennedy. Alao hery àry fa fotoana izao…